Hoggansa KFO Hidhaarraa Alatti Haftanii Yeroof Sabaan Alatti Haftaniif – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHoggansa KFO Hidhaarraa Alatti Haftanii Yeroof Sabaan Alatti Haftaniif
Hoggansa KFO Hidhaarraa Alatti Haftanii
Yeroof Sabaan Alatti Haftaniif
Nafxanyaaf duulee Obboleesa isaa WBO Adamsuu dhaqee ciise! Warrii haftan irraa baradhaa!
Lammaa Dagaagaa jedhama mucaa giincii ti looltu keessatti angoo guddaa qaba Lola naannoo salaalee wbo fi loltu Mootummaa Abbaa irree nafxanyaa gidduutti godhameen lubbuun saa darbeera
Dhiigaa Qeerroo dhuguu dhaqaniiti rasaasni leencichaa morma irraa kutte.
Kuni gazexesa dha moo Mali sila
Obbo Alamaayyoo Duroo qondaalli ABO guyyaa har’aa poolosii Humna Addaa Oromiyaatiin qabamuu maatiin isaanii OMN-tti himan. Obbo Alamaayyoo Duroo itti gaafatamaa Koree To’annoo fi Seeraa ABO ta’uun tajaajilaa kan jiran yoo ta’u, Dilbata har’aa 01/11/20 Magaalaa Buraayyuutti mana jireenyaa isaanii keessaa Poolisii Humna Addaatiin to’atamanii konkolaataan fudhatamuu Maddi keenya OMN-tti himanii jiran. Obbo Abdii Raggaasaa dabalatee, Qondaalonni ABO hedduun mana hidhaatti hiraarfamaa jiraachuufi mirga wabii manni murtii eegeefis kabajamuu dhabuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.
1, Isin Araara Biyoolessaa, Waliigaltee Biyyoilessaa jettanii Mummicha Nafxanyaatti Izgoo yoo jettanii kadhattan inni isin tuffatee Tigraayitti yeroo lammafaaf Jaarsummaa erguuf yoo deemu maal isinitti fakkaata?
Maalif keessan didee isaanitti Jaarsummaa ergata? Isaan keessa ofiitii akka hin diineffatin, humna waan qabaniif isinitti hin fakkaatuu? Osoo araarri kun milkaa`eefii achii as deebi`ee maal gochuuf akka ta`e isinitti hin mul`atuu? Araaras osoo ta`ee humna ofii jabeeffatanii kan qabatan qabataniit Araaraaf taa`uu filannoo dirqii jalaa taasisu malee akka amma isin jirtan kanattii? Akka amma nuti jirru kanattii?
2, Tigraay Araaraaf kophaa hin taa`u, ulaagaan jalqabaa Hidhamtoota Siyaasaa hiikuudha yoo jettu, Hidhamtootni Siyaasaa sun Jaallan isin biraa hidhaman san akka ta`e garaan keessan hin beekuu? Tigraay maaliif ulaagaa kana akka olkeesse hoo isinii hin gallee?
3, Hidhamtootni Siyaasaa ha hiikkatani jettanii gadi qabdanii ijjannoon dubbachuu, dhiibbaa gochuu maa qaanoftani?
4, Akka Heera biyyattiitti Fulbaana 25 darbee as Mootummaan Angoo Seerawaa qabu jiraa?
5, Paartiin Boordii Filannoo jalatti galmaa`ee beekamtii qabu kamuu Fulbaana 25 darbe kanaa as Aangoo Raayyaa Ittisa biyyaa fi Poolisii ajajuu, bobbaasuu qabu jiraa?
6, Heera biyyattii maaf kabajuu diddani? Mootummaan Ce`uumsaa akka dhaabbatuu fi garasitti akka deemamuu qabu maaf gadi dhaabdanii ijjannoon dubbachuu dhabdani?
7, Carraa Qabsoo Karaa Nagaa fi Heerawaa uumamee fi jirutti fayyadamuu maaltu harkaaf afaan isin qabe?
8, #Bilxiginnaan_Nafxanyaa, EZEMA fi ABIN Sammuun wal dubbisanii ijjannoo tokkoon gara tokko dhaabbatanii jiru, Isin Humnoota Federaalistii walitti fiddanii gama tokkoon tokkummaan hiriirsuu maaltu isin qabe?
9, Bakki isin jirtan guddaadha, Rakkoon harka keenyaan keessa of galchine guddaadha jenneet yaadna. Hoggansa sirrii iddoo fi dhageettii, beekumsaa fi dirqama qabdan madaalu kennaat jirra jettanii yaadduu?
Walumattuu gaarii jirra, gaarii deemaa jirra, kara gaariitti deemaa jirra jettanii yaadduu?
Akii wanti isin dhibe, wanti nuti isiniif hin hubanne yoo jiraate himadhaatii ha malannu malee nuti gaarii jirra, Akka gaariitti Mataa Qabsoo hogganaa jirtu jennee hin yaadnu.
*An gama kiyyaan Jaallan keessan Jawaar, Baqqalaa, Dajaneefaa hidhaatti gattanii Filannoo yartuu fi taphaatti akka hin seennen sodaadha.
“Gaafa Guulaa Nu Guulchisaa
Gaafa Duulaa Nu Duulchisaa” isiniin jedhee jira Artistichi.
Dhimma ‘Impaayera Itoophiyaa keessa mootummaan hin jiru’ jedhamuu fi Ibsa Addi Bilisummaa Oromoo, Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa hundeessuun barbaachisaa ta’uu ilaalchisuun baase irratti, marii Hayyuu Oromoo Gameessa, Obbo Daani’eel Dafaa waliin taasifame
#RSWO – Onk 31, 2020